Ko vaKristu hapana counterweight pamusoro zvakaipa munzanga? | Apg29
Vakuru vave kumanikidzwa kuvhara mumajeri, uye kunyange mumajeri Riva, vanhu vave nemamiriro naJesu vakachinja upenyu hwavo.
We vanodedera kana isu kugara pamberi TV seti muone ose mhirizhonga, vose yokufeva, utsotsi uye zvichingodaro. Patinotarira hondo nemifananidzo ropa miviri uye vanhu vachichema nokuchema pamusoro vakaurayiwa hama vanoziva atingadaro tsitsi nokuda iyoyo. Tinoti, "Oh, anotyisa sei anotyisa," kana tichiona uye kunzwa ichi nhau inotyisa.
Asi kuti kuzvipira zvose isu kuzadzisa? Isu kurega kugutsikana nazvo? Tiri vaKristu kuva aenzanise dzose zvakaipa?
Ndanzwa kunyika apo Mweya waMwari wakanga kuda kuitika. Apo vanhu vakatsanya, akachema akadanidzira kuna Mwari kuti kurumutsiriro simba. Jehovha akanzwa munyengetero wavo uye ndaona misodzi yavo uye akatuma simba rumutsiriro.
The Mutsvene akashanda zvikuru kuti kwete chete "vanhuwo vakadzikama vanhu" takaponeswa asiwo zvidhakwa, vakapindwa muropa nezvinodhaka uye kutsotswa.
Ruponeso saka inodedera kudzama varombo ava, vanova zvachose vakasununguka zvose zvakaipa uye mhosva.
Asi isu tiri chii hwomutambarakede vaKristu Sweden? Ita tinorarama kuitira kuti tinogona kuumba counterweight pamusoro chivi uye zvakaipa? Shrugging isu chete pamafudzi kwekanguva pashure takaona wenhamo dzakabatana pamusoro "Report" uye "Current"?
We vanorwisana mumunyengetero pamusoro zvose zvakaipa, chivi uye kusvibiswa kuti muwanze munyika ino? Tinoda kubayira tiri bönekampen kuzadzisa yakasiyana hurongwa zvinhu. Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari anoda kuti "nharirire parusvingo"
In Ezek. 13: 5 tinowana izvi zvakakomba uye akaoma okuti:
"Hamuna kukwira muchipinda pakakoromorwa, kana kugadzira rusvingo rweimba yaIsraeri, kuti akagona mumire pakurwa pazuva raJehovha."
Tinoverengawo Ezekieri. 22:30:
"Ndinotsvaka pakati pavo, kuti vanofanira kuita rusvingo, angamira pakakoromoka pamberi pangu achirwira nyika, kuti ndirege kuiparadza; asi handina kuwana nomumwe. "
Handizivi Jehovha, Mwari anogona kusiya, asi chaizvoizvo anotarisa saka wakati akavapa achiti, "asi handina kuwana nomumwe." Zvinorwadza chaizvo! Ishe anotitarisira simuka kudzidzawo. Anowana mumwe Sweden? Kwete, kwete! VaKristu Most vakarara usingapisi nokuda nehope.
Hapana anenge hapana munhu aizoita "angamira pakakoromoka" achidzivirira yedu murombo yamadzibaba uye vanhu vedu. The basa hunogara zvikuru isu vaKristu. Tinofanira kuita sezvo Abrahamu. Iye "akauya pedyo naMwari" paakabvunza kuti Sodhoma vaizoponeswa.
kuti pakutanga ndima 2 tsaru rwiyo nokuda Lars Linderot Panoti:
"The zvipingamupinyi zvakawanda, vari kurwisana nomweya wangu. Satani haana nyasha iwe zvorudzi. Tambo kumusoro chinotangira chinhu inokanganisa yenyu zvakanaka. Asiye matsime munyika.